Sebenzisa Ukuqapha kwe-faucet
Ompompi Bekhishi, Ukugcwalisa Embizeni, Ompompi Bokugeza | WOWOW
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Sebenzisa Ukuqapha kwe-faucet
2020 / 07 / 29 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 4858
1. Zonke izinhlobo zokungcola kwepayipi kufanele zisuswe kahle ngesikhathi sokufakwa. Gwema ukulimala kwe-valve, jamming, blockage kanye nokuvuza. Ngasikhathi sinye, ingaphezulu kufanele lihlanzwe futhi akufanele kube nezinsalela zezinto zokwakha.
2. Nganoma yiluphi uhlobo lomkhiqizo we-faucet olusetshenziswayo, asikho isidingo sokusebenzisa amandla ngokweqile ekushintsheni, mane nje ugobe noma uguqule. Ngisho nezilobo zendabuko azidingi ukuchitha amandla amaningi ukuze zisonteke. Ikakhulu, ungasekeli noma usebenzise isibambo njenge-handrail.
Imikhiqizo efakwe isembozo se-spout mesh kufanele ihlanganiswe futhi ihlazwe ukukhipha ukungcola ngemuva kwesikhathi sokusebenzisa. Umkhiqizo ohlanganiswe ne-hose kufanele unake ukugcina i-hose isesimweni semvelo sokwelula okuqhubekayo, ukugwema ukulimala.
3. I-bathtub faucet lotus head iron hose kufanele igcinwe isesimweni semvelo yokweluka, ungayifaki emfuleni lapho usebenzisa. Ngasikhathi sinye, uma usebenzisa noma ungasebenzisi, naka ukuxhumana okukhona phakathi kwehose nomzimba we-valve ukuze ungakhi i-angle efile, ukuze ugweme ukugqekeza noma ukulimala kwe-hose.
4. Ngokusebenzisa i-spout kwesinye isikhathi kwenzeka ukuvalwa okungapheleli, ukuvuza, isibambo okungaxhunyiwe, ukuxhumeka okuxhumekile, nezinye izehlakalo, abathengi ngokuvamile bangaxazulula bodwa.
Amakhaya amakhulukhulu we-zinc aluminium, ipulasitiki, ithusi, insimbi, insimbi engenacala, njll.
Ngokuvamile, kusetshenziswa ithusi elingaphezulu, kepha kulula ukugqwala ezindaweni ezinomswakama.
Kunconywa ukusebenzisa insimbi engagqwali kungcono. Ngoba ubunzima bokucubungula amafekhethi wensimbi engenasici mkhulu kunethusi, ngakho-ke nentengo nayo iphakeme.
Kukhona neqiniso lokuthi awukwazi ukubheka nje okokusebenza. Bheka futhi ukushuba. Ijiyile kunokubiza okuncane, okungcono kunenguqulo ezacile
Isincomo esijwayelekile sasemakhaya ukusebenzisa ithusi elikhudlwana, insimbi engenasici entengo yamanje lisaphakeme.
Edlule :: Izizathu zamanani entengo ehlukile Olandelayo: Yikuphi isikebhe esingcono ekhishini ongasikhetha?
2020 / 11 / 19 891
2020 / 11 / 19 901
2020 / 11 / 18 843
2020 / 11 / 16 779
2020 / 11 / 16 869
2020 / 11 / 16 935